Ao amin'ny fanjakan'i Sonora, ao avaratra andrefan'ny Mexico, olona 7 no maty ary 32 no naratra rehefa lozin'ny lozam-piaramanidina nitondra fiara nitondra mpiasa Red Cross. Ny fiampitana amin'ny haavon'ny Sonora any avaratra andrefan'ny Mexico [More ...]
Ivotoerana vaovao fanaovan-tsika vaovao avy amin'ny DHL
Nanokatra afovoany fahatelo tany Chicago i DHL miaraka amin'ny Ivotoerana amerikana fanavaozana hamolavola vahaolana vaovao ho fanatsarana ny lozisialy sy ny fikarakarana ny rozotra famatsiana. Asehoy ny fahavononany ny hampiasa teknolojia vaovao amin'ny fotoana rehetra [More ...]
Lamasinina lalamby no hita teny amoron'ny renirano
Ny kodiaran-dalamby tao Etazonia dia nanakodia ilay tetezana mankany amin'ny renirano. Nilaza izy fa tsy maty na naratra izy. Nandeha teo amin'ny tetezana iray ao Harpers Ferry, Virginia, ny sarety fiaran-dalamby [More ...]
Ilay Amerikanina mpanamboatra fiara herinaratra amerikana Tesla dia nampiditra ny maodely vaovao misy ny fiara fitaterana Cybertruck pick herinandro lasa teo. Ny famoronana fiara, ny fitaratra dia tapaka nandritra ny fanolorana ho lohahevitra tamin'ny andro voalohany. Ho fanampin'izany rehetra izany, [More ...]
Breziliana Sao Paulo Monorail: São Paulo Monorail, rafitra monorail lehibe indrindra any Etazonia, nosokafana tao 2014, miasa ao amin'ny 80 km / h haingam-pandeha ara-barotra any Sao Paulo, Brezila. driverless [More ...]
Sarintany Metro Sao Paulo: Ny San Paulo Metro, izay notanterahina tao 1974, tambajotra lalamby lehibe misy tsipika 6 ary zoro monorail. Misokatra amin'ny andalana 2014 [More ...]
Nosokafana ho an'ny fizahan-tany fizahan-tany ny Browville Railway Tunnel any Brockville, Ontario, Canada. Ny tonelina, izay lalamby tranainy indrindra any Canada, no nanomboka fanorenana tao 1854 ary napetraka ao amin'ny serivisy ao 1860, misy halavan'ny 524 metatra. [More ...]